Guddoomiye Mursal : Xukuumaddu waa in ay deg deg u soo gudbisaa sharciga doorashooyinka | Baligubadlemedia.com
Guddoomiye Mursal : Xukuumaddu waa in ay deg deg u soo gudbisaa sharciga doorashooyinka
Guddoomiyaha Golaha Shacabk Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa ka dalbaday xukuumadda Soomaaliya in ay si deg deg u soo gudbiso sharciga doorashooyinka Qaranka.
Hadalka ayuu guddoomiyuhu ka sheegay munaasabadii furitaanka Kalfadhigga Shanaad ee Golaha Shacabka oo maalintii shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
“Si loo dardargaliyo in doorashooyin ay dalka ka dhacaan sanadka 2020/2021, waxaa Xukuumadda la farayaa in si degdeg ah ay u soo gudbiso hindise sharciyeedka doorashooyinka Qaranka”ayuu yiri Maxamed Mursal.
Guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in Kalfadhiggan Shanaad ee furmay xildhibaannada Golaha Shacabka ay horyaallaan howlo badan oo muhiim u ah Qaranka, isaga oo intaa ku daray in sharciga doorashooyinka oo la meelmariyo uu yahay kan ugu horeeya Baarlamaanka laga sugayo.
Hadalka guddoomiyaha ayaa imanaya xili xukuumadda lagu dhaliilayo in ay ka gaabisay howsha diyaarinta sharciga doorashooyinka soo socda, waxaana qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ay ku eedeeyeen in dowladda kaga mashquushay arrimo kale oo siyaasadeed.